.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flower Flash Effectများ ဒေါင်းရန် ၁
Flower Flash Effectများ ဒေါင်းရန် ၁
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Flower Flash Effect လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Flash Song တွေ ဖန်တီးနေတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အရမ်းကို အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Effect တွေကို ဒေါင်းယူရတာ လွယ်အောင်ရယ်
Effect လေးတွေကို ကြည့်ပြီးမှ ဒေါင်းယူချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရော ၂ ခုစလုံးအဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်
Google Site ကနေ Upload တင်ပေးထားပါတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုရင် Flash ဖိုင် နာမည်လေးတွေကို နှိပ် ကြည့်ပါ။
ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင် အောက်က ပုံလေးမှာ မြားထိုးပြထားတဲ့ Download မြားလေးတွေကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Download: Flower Flash Effects ဒေါင်းရန် ၁
ကျွန်တော် အဲဒီ Page မှာ Flower Flash Effect 50 တင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုစီ တင်ပေးတာက အကြောင်းရှိသလို
နောက်ထပ် Effect အသစ်တွေကိုလည်း Page တစ်ခုမှာ 50 နှုန်းနဲ့ပဲ တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Flash သီချင်းတွေ
လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အပင်ပန်းခံရကျိုး နပ်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးပဲ
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ခုတင်ပေးတဲ့ Effect လေးတွေကို ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့
ထင်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း Flower Flash Effectများ ဒေါင်းရန် ၂ ဆိုပြီး Effect တွေ ထပ်တင်ပေးဦးမှာပါ။
ကျွန်တော့် ဆိုဒ်လေးကို လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 09:59
Labels: Effect, Flash, အသိပေးခြင်း